Qatarta Kooxaha Burcad badeeda Soomaaliya oo laga digay iney markale dib usoo laabato | shumis.net
Home » News » Qatarta Kooxaha Burcad badeeda Soomaaliya oo laga digay iney markale dib usoo laabato
Qatarta Kooxaha Burcad badeeda Soomaaliya oo laga digay iney markale dib usoo laabato
Maraakiibta ku safra biyaha xeebaha Soomaaliya iyo meelaha ka baxsan ayaa wajahaya kororka qatarta kooxaha burcad badeeda sanadkaan, oo si weyn looga baqayo iney sanadkaan kusoo kordhaan xeebaha Soomaaliya.
Warbixin ay soo saartay hayada HIS inc oo fadhigeeda dalka Mareykanka ayaa soo saartay warbixin ay kaga digeyso qatarta kooxaha burcad badeeda iney kusoo laabtaan xeebaha Soomaaaliya iyo meelaha ka baxsan.
Hey’adaan ayaa warbixinteeda ku sheegtay in xaaladihi u suura gelin jiray burcad badeedka inti u dhaxeysay 2005-2015 sida siyaasiyiinta oo u sameyn jiray in ay siiyaan goobo ay isku qariyaan kadib marka ay maraakiibta afduubtaan si ay madax furasho uga helaan iminka dib loo aas aasay.
Warbixinta ayaa lagu xusay meelaha lagu naas nuujin jiray burcad badeedka in ay ka mid tahay deegaanada Gamudug.
“Tani macnaheedu waxay tahay in burcad badeedka Soomaalida ee wali heysta awoodaha xagga farsamada, hubka, dad iyo shabakado dhaqaale ay wali awoodaan in ay dib isu soo abaabulaan kadibna geystaan weeraro ay ku qafaalanayaan maraakiibka,” yey hey’ada IHS ku sheegtay ribootkeeda.
Ma jirin wax weerar ah oo ay geysteen burcad badeedka sanadki lasoo dhaafay sababtoo ah waxaa marin biyoodyada iyo biyaha Soomaaliya roondoo joogta ah ka sameeya Maraakiibta Dagaalka ee dalalka Midowga Yurub
Title: Qatarta Kooxaha Burcad badeeda Soomaaliya oo laga digay iney markale dib usoo laabato